Elia Rabevahiny - Otrikafo « Ny frantsay no nanapoaka ny 29 martsa 1947»
Isan’ny antoko politika vitsy mba tsy hilazana hoe tokana mahatsiaro hatrany isan-taona ny 29 martsa 1947 ny antoko Otrikafo, hoy ny sekretera jeneraliny, Elia Rabevahiny.
Antony dia adidin’ny antoko politika sy fikambanana rehetra ny mampahafantatra ny tantara amin’ny vahoaka. Isan’ny lesoka eto amintsika koa io tsy fahalalana ny tantara io. isan’ny mbola manjavozavo ny raharaha 1947. Ny mpikaroka sy mpahay tantara rehetra dia mahalala tsara fa tsy ny MDRM no nanomana ny 29 martsa 1947 fa ny frantsay no nanao ny fomba rehetra hitrangan’iny hamotehana ny MDRM sy handripahana ny Malagasy rehetra. Voaporofo izany ny taona 1946 izay nisian’ilay telegrama nalefan’ny minisitra frantsay, Marius Moutet, tamin’izany fotoana ho an’ny governora jeneraly tetsy Ambohitsorohitra milaza hoe “Abattre le MDRM par tout les moyens”. Izany hoe nitolona tamim-pilaminana ny MDRM ary tsapan’ny frantsay fa sarotra ny hanohitra izany. Raha tiana ny hampandroso ity firenena ity, hoy ny otrikafo, dia isan’ny singa iray goavana hahatongavana amin’izany ny fampahafantarana sy fanitsiana ny tantara. Anio zoma etsy amin’ny Tahala Rarihasina Analakely moa no hanasan’izy ireo izay liana amin’ny fanazavana fanampiny rehetra.